श्रृगांर किन आवश्यक ? श्रृंगार सुन्दरताका लागी मात्र नभई आत्मविश्वासका लागी समेत - Entertainment Khabar
प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक ०९, २०७७ समय: १४:०२:३०
हरेक महिलाका लागी श्रृंगार महत्वपुर्ण रहन्छ । अझ चाडपर्वका बेलामा महिलाका लागी श्रृगांर अपरीहार्य झै रहन्छ । विशेषतः तिजमा महिलालाई श्रृगांरको महत्व विशेष रहन्छ । शरीरका अंग अगंगमा श्रृगांरले ढाकिदाँ उनिहरुको सुन्दरता निखारीने गर्दछ ।
श्रृंगार सुन्दरताका लागी मात्र नभई आत्मविश्वासका लागी समेत आवश्यक पर्दछ । कतिपय श्रृगांर सामाग्रीले स्वास्थ्यमा समेत लाभ पुर्याउँछ ।
सिउँदोमा लगाइने सिन्दूर ब्रहम्रंध्र र अहिम नामक मर्म स्थलको ठिक माथि लगाइन्छ । यो स्थान अत्यन्त कोमल हुने गर्दछ । तसर्थ सिन्दुर लगाउँदा यस स्थानको सुरक्षा हुने गर्दछ । साथै सिन्दूरको प्रयोगले यसमा भएका तत्वले अनुहारको चाउरी र शरीरमा हुने विद्युतीय उत्तेजनामा नियन्त्रण गर्दछ ।
२. सिरबन्दि (मांग टिका)
सिउँदोमा सिन्दुर लगाएको भाग छोपेर निधारको माथि गोलो आकारको झुण्डिएको गहनालाई सिरबन्दि (मांग टिका) भनिन्छ । यसले महिलाको सुन्दरतामा निकै महत्व राख्दछ । यस अलावा मस्तिष्क सम्बन्धी क्रियामा सन्तुलन समेत बनाउँछ ।
निधारको बिच भाग वा दुई आखिँ भौको बिचमा लगाइने टिका (बिन्दि) ले महिलाको ब्यक्तित्व प्रभावशाली बनाउँछ । यसले महिलामा आत्मबल र आत्मविश्वास बढाउँछ । निधारको बिचमा टिका लगाउँदा यसले तेश्रो नेत्र जागृत गर्ने मान्यता छ । यस अलावा टिकाले मष्तिक शान्त बनाउन पनि मद्दत गर्दछ ।
४. गाजल (काजल)
गाजलले महिलाको सुन्दरतालाई कैयौं गुणा बढाउने गर्दछ । अनुहारको सुन्दरता सहित गाजल लगाउँदा आँखामा समेत शितलता प्राप्त हुन्छ । गाजलले आँखा सम्बन्धी कैयौ रोगबाट बचाउँछ ।
फुलीको तुलनामा नथियाले महिलालाई बढि सुन्दर देखाउँछ । तर यो सबै महिलाको हकमा लागु नहुन पनि सक्छ । फुली वा नथिया लगाउँदा नाकमा हुने एक प्रकारको एक्यूप्रेशर प्वाइन्ट प्रेसर रहन्छ । जसले प्रसव पीडाका क्रममा हुने दुखाई कम गर्न सहायता पुर्याउँछ ।
कानमा लगाइने गहना झुम्का पनि महिलाको सुन्दरतामा महत्वपुर्ण रहन्छ । झुम्काले आँखाको ज्योती बढाउन मद्दत गर्दछ । कानको तल्लो भागमा आखाँमा पुग्ने एक नसा हुन्छ । तसर्थ सो भागमा झुक्का लगाउँदा आँखालाई फाइदा पुग्दछ ।
७. मंगलसूत्र वा हार
आयुर्वेदका अनुसार गलामा सुनको धारण गर्नु मुटुका लागी लाभदायक हुन्छ । मंगलसूत्रबाट निस्कने वायुले इम्यूनसिस्टममा राम्रो प्रभाव पार्दछ । साथै यसमा हुने कालो मोतीले खराब नजरबाट बचाउँछ ।
८. पाखुराको गहना
महिलालाई बढि उमेरमा पनि सुन्दर देखाउन वा जवान जस्तै देखाउन पाखुरामा लगाइने गहना महत्वपुर्ण हुन्छ । यि गहना पाखुरामा लगाउँदा पाखुरामा दवाब पर्दछ र रक्तसंचार सामान्य हुन्छ ।
अधिकाशं महिला हातमा चुरा लगाउने गर्दछन् । नाडीमा लगाइउने चुराको एकआपसमा हुने टकरावले शरीरमा रक्त प्रवाहलाई सहज बनाउँछ । चुराको प्रयोगले हर्मोन सामान्य राख्न मद्दत पुर्याउँछ ।
औलामा धारण गरीने औठीले शरीर आलस्य हुनबाट जोगाउँछ । औठीको धारणले सुस्त मनस्थिती घटेर शरीर फुर्तिलो हुन्छ ।
हत्केलामा लगाइने मेहन्दीले हातको सुन्दरता बढाउने गर्दछ । यसले हातमा भएको घाउचोट ढाक्नुको साथै शरीरमा शितलता पनि बढाउँछ । यस अलावा मेहन्दीको प्रयोगले छाला रोगबाट पनि बचाउँछ ।
कमर लगाइने गहना कमरबन्दले महिलाको शरीरतर्फ आर्कषित गर्दछ । यसले महिलालाई कामुक देखाउने गर्दछ । यस अलावा महिलामा हुने कम्मरका समस्यामा समेत फाइदा पुर्याउँछ ।
पाउजुको धारणले खुट्टाबाट निस्कने शारीरिक विद्युतीय ऊर्जालाई शरीरमा नै संरक्षण गर्न सघाउ पुर्याउँछ । चाँदीको पाउजु लगाउँदा यसको घर्षणबाट हड्डि बलियो बनाउँछ ।
खुट्टाको औलामा लगाइने गहना बिच्छुले एक प्रकारको प्रेशर नशामा पार्दछ । यसले गर्भासयमा समुचित रक्तसंचार प्रवाहित गर्न सघाउ पुर्याउँछ । यसको प्रयोगले गर्भधारण क्षमता राम्रो बनाउँछ ।
अनुहारमा लगाइने मेकअप, नेल पोलिस लगाउतका मेकअपले महिलाको सुन्दरता बढाउने गर्दछ । महिला आफु सुन्दर भएमा आत्मविश्वास बढ्ने गर्दछ ।